China Emergency Bottom Valve fekitari uye vagadziri | Jiasheng
Zvinyorwa uye Saizi:
Aluminium Chiwanikwa:80/100/150 (3 ”/ 4” / 6 ”)
Simbi isina ngura:80/100 (3 ”/ 4”)
Nhoroondo 1: emergency yakagura vharafu, yakaiswa pazasi kwetangi tangi,. Kana ngarava ikakura zvakanyanya, emergency ichicheka vharuvhu ichapaza otomatiki, yoparadzanisa tanker muviri nepombi yepasi kuita yakazvimirira tanker muviri, kudzivirira kuyerera kwemvura uye nekuvandudza zvakanyanya kuchengetedzeka panguva yekufambisa, saka inoshandiswa zvakanyanya pasirese. Ichi chigadzirwa chinosanganawo neQC / T932-2012 yakajairwa.
Basa uye hunhu: iyo yekukurumidzira yakagura vharuvhu kushandisa aruminiyamu chiwanikwa zvinhu, kukanda kuumbwa, yakaoma oxidation kurapwa pamusoro, yakakwira corrosivity kuramba, zvishongedzo zvayo mukati mekushandisa isina simbi zvinhu, kuwedzera hupenyu hwayo hwebasa.
45 ° yepasi vharafu
90 ° pasi vharafu
180 ° pasi vharafu
Fuel tanker tsoka vharuvhu inonziwo Bottm Valve yakaiswa pazasi kwetangi, iwo ekumusoro mativi akanyatsovharwa mukati me tanker. Kunze shear groove dhizaini inogumira chigadzirwa kupera kana tanker yadonha pasi, ichangozvicheka yega kuburikidza neiyo groove pasi pemamiriro ezvinhu hapana chinokanganisa pakuiswa chisimbiso. Izvi zvinodzivirira zvakaringana pamusoro peturu tanker kubva mukudonha kuti ive nechokwadi chekuchengetedza kana kutakurwa. Ichi chigadzirwa chakakodzera mvura, dhiziri, peturu uye parafini uye mamwe mafuta emagetsi, ect.
1. Nyaya: Aluminium
2. Kukura: 3 ", 4"
3. Batanidza typ: Square Flange
5. Kupisa: -20 ~ 70 degree
Batsirwa & Feature
1. Pressure-Yakadzikama Rudzi
Kana vharuvhu ikavharwa, kumanikidza kwemafuta hakukwanise kuvhura vharuvhu.
2. Special Surface Kurapa
Muviri wese wevhavha wakapfuudzwa yakakosha pevhu maitiro ekuvandudza iyo anti-ngura.
3. Hydrodynamic Muviri
Dhizaini uye yepamusoro yekusimudza poppet inoderedza kumanikidza kudonha kuti upe yakanyanya kuyerera chiyero.
4. Kunze Sheari Groove
Inosangana nezvinodiwa zvinodiwa kudzikisira kushambadzira kwechigadzirwa kana paitika tsaona.
5. Chinyorwa Chekuvhura Chinyorwa
Kana zvichida kukurumidzira kuburitsa, iyo pneumatic kudzora haina basa, inogona kuvhurwa nenzira yechinyorwa.
Iko kukura kwevhavha kwakanyanya kungwara, kwakakodzera kudiki kwenzvimbo kudiwa.
Pashure: 5-Wire Kuwedzeredza Optic Ongororo uye Socket
Zvadaro: Flange Kufema Valve
Emergency Cheka Off Valve
Emergency Kuvhara Off Valve
Tangi Rori Emergency Pasi Vharuvhu